“Xukuumadda iyo maamul-gobolleedyadaba go’aan kama gaari karaan doorashada” – Kalfadhi
Xildhibaannada Golaha Shacabka iyo Aqalka Sare ayaa soo doortay madaxweynaha, isagoo markaas kaddibna soo dhisay xukuumaddana.
Muran xooggan ayaa hadda ka taagan sida ay u dhici karto doorasho waqtigeeda waafaqsan, xilli ay jiraan walaacyo ku aaddan muddo korosi.
Guddoomiye Mursal ayaa sheegay inaysan jiri doonin suurtagalnimda in la akordhin doono muddo xileedka Baarlamaanka iyo madaxweynaha.
Wuxuu sidoo kale meesha ka saaray in laga tashado muddo kororsi uu sameysto baarlamaanka, taasoo horseedi karta in waqtiga xil-heynta madaxweynaha lasii dheereeyo.
“Dastuurka ku meel gaarka ah markaad akhriso, qodobka 64-aad wuxuu sheegayaa in xil-heynta baarlamaanka ay tahay 4 sano, qodobka 91-aad markaad fiirisana wuxuu dhigayaa in xil-heynta madaxweynaha ay tahay 4 sano.
Marka ma jirto meel ay baarlamaanka ugu bannaan tahay inay xilka korosadaan, baarlamaankuna hadda uma diyaar garoobayo inuu xil kororsadee wuxuu u diyaar garoobayaa in shuruucdii dhinneyd uu dhammeystiro. Warbixintan waxaa horay loogu daabacay BBC
Guddoomiyaha Golaha Shacabka oo sheegay in aysan aqbali doonnin doorasho dadban